Australian Education Exhibition 2019 - Yangon - 30 MAR 2019
Hosted by Australian Visa & Student Services (AVSS Myanmar)
သြစတြေးလျ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းပေါင်း (၂၃) ကျောင်း နှင့် သြစတြေးလျ သံရုံး၏ Australia Awards Scholarships Myanmar နှင့် AusTrade တို့ မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် သြစတြေးလျ ပညာရေး ပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ တွင် အောက်ပါ အစီ အစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
Exhibition: 9:30 a.m. – 3:30 p.m.
Grand Ballroom – Level 2, Melia Hotel Yangon
Seminar: 9:30 a.m. – 10:30 a.m.
1) How to prepare for academic success by AEC English Centre
2) Study in Australia by AusTrade, Australian Embassy
3) Australia Awards Scholarship nformation session by AAS Myanmar
=> အဆိုပါ ပညာရေးပြပွဲများတွင် သြစတြေးလျ သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် သြစတြေးလျ အစိုးရ ပညာသင်ဆု(Australia Awards) အကြောင်း၊ သြစတြေးလျတွင် ပညာသင်ကြားရန်သိသင့်သိထိုက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအကြောင်းနှင့် AEC English Centre မှ ပညာသင်ကြားရာတွင် အောင်မြင်မှု့ရရှိစေရန် မည်သို့ ပြင်ဆင်ထားသင့်သည် တို့ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။
=> ပညာရေးပြပွဲကို တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် http://bit.ly/2TunFxb တွင် စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်ဖုန်း -0945000 6944/6955, 09 799450 944/955 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
=> တနှစ်လျှင် ကျောင်းလခ သိန်း ၁၀၀ ၀န်းကျင်ခန့် သာ ပေးသွင်းရမည့် ဒီပလိုမာသင်တန်းများ
=> အခြေခံ ပညာအထက်တန်းအောင်၊ IGCSE အောင်မြင်ထားသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည့် ၅၀% ကျောင်းလခ သက်သာစေမည့် foundation program အကြောင်း
=> တနှစ်လျှင် ပညာသင်ဆု AU$10,000 ရနိုင်မည့် ဘွဲကြို၊ ဘွဲ့ လွန် သင်တန်းများ အကြောင်း
=> သြစတြေးလျ အစိုးရမှ ပေးသည့် Australia Awards Scholarship အကြောင်း
=> ကျောင်းများ၏ ကျောင်းဝင်ခွင့် လုိုအပ်ချက်များ၊ အခြားပညာသင်ဆုအခွင့်အလမ်းများ၊ လေ့လာသင်ယူနုိုင်သော ဘာသာရပ်များအကြောင်းတို့ ကို ကျောင်းတာဝန်ခံများနှင့် တစ်ဦးချင်း တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
=> သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အိမ်၊ခြံမြေ ၀ယ်ယူလိုသူများနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်း လည်ပတ်လိုသူများအနေဖြင့် ခရီးအစီအစဉ်များကို Sunrise Valley property investment နှင့် Travel & Tour မှ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လာရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
#၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဆေးပညာဆရာဝန်ဘွဲ့ တက်လိုသည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ နှင့်
# တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း, IGCSE, GCE "A" level, SAT, IB Diploma အောင်မြင်ထားသူများ၊ HND ဒီပလိုမာ ရရှိပြီးသူများ၊ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ ရရှိထားပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားလိုသူများ ပြပွဲနေ့ များတွင် ကျောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
*** အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် ***
ပညာရေးပြပွဲတွင် ကျောင်းလျှောက်သည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနေဖြင့် Application Fee များ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်းမာရေး အာမခံ ၆လစာကို AVSS Myanmar မှ လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ပြင် ကျောင်းသားဗီဇာ၊ အုပ်ထိန်းသူဗီဇာနှင့် မိဘများအတွက် အလည်လိုက်နိုင်ရန် ဗီဇာများကိုလည်း မည်သည့်ဝန်ဆောင်ခမှ ပေးရန်မလိုဘဲ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ပညာရေးပြပွဲကို အောက်ပါ ကျောင်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်တိုင် လာရောက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သြစတြေးလျတွင် ပညာသင်ကြားလိုသည့်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ မပျက်မကွက် လာရောက်လေ့လာ မေးမြန်းနိုင်ရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
2. Australian Pacific College
3. CQ University
4. Deakin College/Deakin University
6. IES - University of Queensland
Taylors College University of Sydney Foundation
Taylors College UWA Foundation
11. Swinburne University of Technology
14. The University of New England
15. Trinity College Pathway School (University of Melbourne)
17. The University of New South Wales
18. UNSW Global
19. The University of Sydney
20. UTS: Insearch
21. University of Technology Sydney
22. Victoria University
23. Western Sydney University
104454 Views - 04/04/2019 Last update
ကမ်ဘာအေးစတေီလမျး Kabar Aye Pagoda Road, ဗဟနျး, Yangon, မွနျမာ
Yangon Carnival (Thingyan experience)
Cocktail Party - The Art of Mixology
2020 The 12th International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2020)
The 3rd International Conference on Machine Vision and Applications (ICMVA 2020)
Discover more events in ဗဟနျး
Australian Visa & Student Services (AVSS Myanmar) ›
Check out other events in ဗဟနျး
Stay updated on Australian Education Exhibition 2019 - Yangon and find even more events in ဗဟနျး.